Izindlovu zezinwele ezimfushane ezinezingxube
Inzuzo enkulu yezinwele ezincane ukuthi ihambisana nabantu bonke. Kodwa nokho kuyasiza kakhulu - izinwele ezimfushane kulula kakhulu ukuzibeka, kunokuba uzikhiphe isikhathi eside kulesi sikhumba. Futhi ungacabangi ukuthi izinwele zezinwele ezimfushane ne-bang zakhiwe azanele. Eqinisweni, ziningi. Futhi maduzane baqala ukuthandwa kakhulu!
Izitayela zokugqoka nezokungavamile ezenziwa izinwele ezimfushane ezinezingxube
Into esemqoka ekunqunyeni izinwele ezimfushane yiyona inkosi eyayenza. Uchwepheshe kufanele akhethe ifomu elihle. Uma kungenjalo, isithombe singase sibe ngenye indlela esonakele.
Enye yezinwele ezithandwayo kakhulu zezinwele ezimfushane nge-bongo elixubileyo ibhontshisi noma i square. Ngokwezinwele ezinjalo ezinjalo, izinwele zinqunywe emgqeni owodwa oqondile. Ubude bawo kufanele bube ngaphansi kwezindlebe noma umugqa wesikhumba. Njengomthetho, ama-quads noma ubhontshisi ayidingi ukubeka ngokucophelela. Futhi lokhu akukwazi ukwaziswa ngabesifazane abazisa isikhathi sabo samahhala. Okuvamile kakhulu namuhla yikhanda le-karas elincinci elinezinwele ezinezintambo ezide kuze kube ngamashiya. Ngokujwayelekile kubheka ukukhiya okuqondile. Kodwa lokhu akusona isizathu sokucasula amantombazane angama-curly. Izindwangu ezincane ezingenandaba, ezinomoya nezinothando ezinwele ze-wavy - enye i-squeak yefashini.
Ukuze wenze i-stylish stylish izinwele ezimfushane nge-bang ekhaya, kwanele ukuzivikela ngekhefu, ibhulashi neswele. Yenza ukuhlukana kwe-oblique nokulala okuncane, futhi amathiphu ngesikhathi esisodwa ashiye ngokucophelela. Isithombe sizoba ngokulinganisela futhi sizithokozise.
Amantombazane amaningi ahlambalaza ngezinwele zezinwele ezimfushane ezinama-oblique. I-asymmetry ingaba bushelelezi, kodwa izinwele zokugquma ezinomqondo ohlukanisa ngokuphelele phakathi kokukhiya okufushane nokude zibukeka kahle. Izithombe ezinjalo zivumela ukuba khona kwamathempeli aphuziwe , ukukhwabanisa okukhanyayo okuningi futhi ngisho nokuphazamiseka kobuciko ekhanda nama-curls omisiwe phezulu.
Ama-hairstyles wezinwele zakusihlwa ezincane ezinama-bangs. Ukubhalisa angasetshenziswa:
I-stylish kakhulu futhi imnene kuma-haircuts amancane bheka izesekeli:
ehlotshiswe ngezingubo zokugqoka;
amathoni ngisho nezigqoko zokuhlobisa.
Futhi ungakhohlwa ukuthi ngesithombe esinesihenqo esincane esincane esifushane, amacici amakhulu, avela emaceleni kanye nemigexo cishe njalo ephelele.
Idayi lezinwele ze-Violet
Indlela yokwenza izinwele eziseduze?
Ungakhetha kanjani izinwele?
I-Shea Butter for Hair
Uju lwezinwele - luzuzisa
Izitayela ezinhle zeNyaka Omusha
Indlela yokwenza ama-curls amahle?
Ama-wigs wokufakelwa - imithetho yokusetshenziswa nokunakekelwa kwama-curls
I-Fur bang ebusweni obunzima - izithombe ezingu-57 zezinketho ezingcono kakhulu
Izinwele zezinwele zezinwele ezide eziphakathi
Ama-lensi othintana nabo - izinzuzo nezingozi
Trehlyazh enezibuko ezintathu izibuko
I-Pavlovskaya iminyango enoboya
Amalungiselelo emifino ngokuya esikhathini
Isitayela saseFrance - izingubo zabesifazane
Yini ongayithatha ingane olwandle?
Amazinyo amhlophe: sihlukanisa amathiphu awusizo avela engozini
Indlela yokugcina i-Lent?
Uhambo lokuhamba ebusuku
I-ethmoiditis - izimpawu kanye nokwelapha
U-Ariana Grande uveze induduzo kubo bonke abahluphekile futhi bafa ngesikhathi sekhonsathi yakhe
Ijelisi le-Nail le-polish 2016
Isiketi sinephrinta elihlaza
Kungenzeka yini ukondla isobho se-pea?